အလုပ် အမျိုးအစား
သတင်းမီဒီယာ ၀န်ထမ်းအလုပ် (1)
အလုပ်ရှင် (သို့) Company
24autocenter | YGN |4လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
၁ သိန်း / sales
We want people want to develop financial skills while attending University. it is Free and Independent working with us. work is just like playing games and dealing with people from Business sector for sales completed development is unlimited and working outstanding with us will become Millionaires- can guarantee if you can learn from us Interested? Apply here with your CV with contact details. Then interview will proceed if you are short-listed for Millionaire. 24autocenter Your Development is ours!
24autocenter| YGN|4လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
Contract ၁ သိန်း / sales
May Stars International | YGN |4လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
100 $ /month
May Stars International Company တွင် Independent Contractor အဖြစ် အလုပ် လုပ်ကိုင် ရန်အောက်ပါ အလုပ်နေရာများ လိုအပ်လျက်ပါ။ Sales Executive - ၂ နေရာ (ကျား သို့မဟုတ် မ) ပြည်တွင်း ခန့် ထားရန်သာ ဖြစ် သည်။ ကျောင်းတက် နေ သော ကျောင်း သား ကျောင်းသူ များ ကို ဦးစာ ပေး ခေါ်ယူ ပါမည်။ Training စီစဉ်ပေးမှာ ဖြစ် ပြီး သွက်လက် သော ၊ အမြင် ကျယ် သော ကျောင်း သား၊ ကျောင်း သူ များ ကို အလိုရှိပါသည်။ အလုပ် ချိန် ကို Fixed သတ်မှတ် ထားခြင်း မရှိ ဘဲ Result ကို သာ အဓိက ဦး စား ပေး သော အလုပ် ဖြစ် ပါသည်။ ကျောင်း တက် နေ ရင်း အလုပ် ကို လုပ် ကိုင် လို သူများ ကို ကြို ဆို ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို hr@maystars.com ကို email ပို့ မေးမြန်း နိုင် သလို ဒီနေ ရာ က နေ လျောက် ထား ပါ ကလည်း ပို အဆင်ပြေပါတယ်။ Shore listed Candidate ကိုသာ ခေါ်ယူ မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
May Stars International| YGN|4လ များ ကြာခဲ့ပြီ။
Contract 100 $ /month
ဒီအမျိုး အစား မှ အလုပ်အကိုင်ရာထူး များ ကို Email ပို့ ပေးပါ။
ကျွန်တော်တို့ စာ ပို လိုက် ပါ တယ် ။ subscription လုပ်ဆောင် ပို့ ထပ်မံ ပြီး ဖော်ပြပါ Link မှ confirmation လုပ် ရပါ မည်။
အသုံးပြု ပြီး မှန်ကန်သော email ကို ဖြည့် ပါ။
Email သည် မှန် ကန် ခြင်း မရှိ ပါ။
24jobcenter.com © 2018　Sponsored by May Stars International Company